Ukumaketha Kwamaselula Embonini Yezokuthengisa | Martech Zone
Ukumaketha Kwamaselula Embonini Yezokuthengisa
NgoLwesibili, Okthoba 22, 2013 NgeSonto, Okthoba 4, 2015 Douglas Karr
Iselula nokuthengisa kabusha kuyaqhubeka nokunikeza ithani lamathuba kubathengisi ukwenza ngcono inani lamakhasimende futhi bandise ukwethembeka - ekugcineni ukushayela ukuthengisa. Amasu alula afana Imiyalezo ye-SMS babe namazinga okuphendula anomthelela omkhulu. Izixazululo ezithuthuke kakhulu njenge izicelo zeselula kungathuthukisa isipiliyoni sokuthenga kumakhasimende.
I-Dynmark iyinkampani ye-UK mobile intelligence kanye nemiyalezo. Bahlanganise le infographic enikezela ngezibalo ezinamandla ukuxhasa imizamo yakho yokuthengisa ngokusebenzisa ubuchwepheshe beselula.
Tags: i-dynmarkuhlelo lokusebenza lweselulaukumaketha amaselulauhlelo lokusebenza lweselula lokuthengisatekutsengisaimboni yezitoloukumaketha okuthengiswayoSMSimiyalezo
I-Ultimate Email Marketing Cheatsheet
Amapulatifomu Wakho Wokumaketha Awanembile Njengoba Ucabanga
I-Oct 23, i-2013 ku-1: i-04 PM
I-infographic enhle, ngiyabonga ngokwabelana ngayo noDouglas. Ngikuthola ikakhulukazi kuwusizo iseluleko sokugcina abasinikeza ekugcineni "abathengisi abahlakaniphile bazo…". Imakethe yamaselula iqinisekile inikezela ngamathuba amahle esikhathini esizayo kulabo abanamakhono anele okusebenzisa.